Eletriki | October 2021
Isi > Eletriki
brompton igwe eletrik
Brompton igwe eletriki igwe - otu esi emeso
Ihe eletriki Brompton ọ bara uru? Ọkụ eletriki na-arụ nnukwu ọrụ na ịghara imebi ihe mere Brompton ka ọ bụrụ igwe mgbasa ozi dị egwu. Ọ na-egosipụta usoro amamihe nke nwere batrị a na-ahapụ ngwa ngwa na akpa nke aka ya, ya mere, a naghị egbochi ogige ahụ. Ike nnyefe dị mma na oke dị egwu. Na a mmanya-ndokwasa njikwa, M ga-ahụ obere ka na-ata ụta.
ịzụta igwe eletrik
Zụta igwe eletrik - otu esi edozi
Kedu igwe eletrik kachasị mma maka ego ahụ? ANCHEER 20MPH Ebike: Ezigbo igwe eletriki igwe eletrik ANCHEER 20MPH Ebike na-enweta ngwa ngwa karịa igwe eletrik eletrik kachasị mma nke ụdị 2021. Dị ahụ na-aghọ ngwa ngwa otu n'ime ndị na-ewu ewu ebike kachasị ewu ewu n'ụwa na ụdị nke ụdị ewuru nke ọma.
scott e-sub tour 2018 igwe eletrik
Scott e-sub tour 2018 electric bike - kacha ndu
Ndi igwe eletriki Scott E di nma? Ihe niile banyere igwe kwụ otu ebe a na-adọrọ adọrọ, site na nnukwu taya 27.5 nke anụ ọhịa na igwe 400Wh dị ike nke ga-eburu gị ebe niile. Onweghi otutu igwe a enwetaghi, ya bu na ego di obere nke na eme ka igwe a buru ibu nke nwere mmasi igwe eletrik.
esi agba igwe eletrik
Otu esi agba igwe eletriki igwe eletrik - azịza ohuru
Ọ dị mfe ịnya igwe eletrik? Ahụmahụ ịnya ụgbọ azịza ya dị nkenke bụ na ịgba ịnyịnya ígwè na igwe elektrọnik dị ọtụtụ dịka igwe kwụ otu ebe ọ bụla. Banye ma malite ịkwado ya, mgbe ahụ igwe eletrik eletrik na-amalite. Ọtụtụ mgbe mgbanwe a na-adị ire ụtọ na ị gaghị achọpụta. Igwe eletriki eletriki anaghị agbanwe ihe ịgba ígwè ọ na-eme ka ọ dịrị ya mfe ịme.
black Friday elekere igwe eletrik
Black Friday eletriki igwe eletrik - nkọwa zuru ezu
Kedu mgbe e-igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala? Ihe mgbochi ọnụahịa zuru oke na ngalaba e-igwe kwụ otu ebe dị n'okpuru euro 2000. # E-igwe kacha ere ahịa 2nd Ancheer City E-Bike (26 sentimita asatọ) ọnụahịa *: 809.99 euro 3rd smartEC Camp-20D mpịachi igwe kwụ otu ebe (20 inch) price *: 1099.00 euro 4th Moma Bikes e-bike (26 sentimita asatọ) ọnụahịa *: 832.57 euro 5th nke VIVI igwe kwụ otu ebe (sentimita 26) ọnụahịa *: euro 719.90
ịgba ọsọ ọsọ igwe eletrik
Ogo ịgba ọsọ eletrik - otu esi edozi
Kedu ụdị ọsọ ị ga-aga n’igwe eletrik? Kedu otu ngwa ngwa igwe eletriki igwe eletrik ga-aga? Ọtụtụ igwe eletriki igwe eletrik ga-enyere gị aka ruo 15.5mph n'ihi na nke a bụ oke iwu.
ezigbo igwe eletrik
Egwuregwu igwe eletrik Ampler - esi eme ihe
Ebee ka a na-eme igwe igwe ịgba agba? Tallinn
ọkụ eletrik igwe eletrik 2016
Igwe eletrik eletrik kachasị dị na 2016 - otu esi edozi
Kedu ihe igwe eletrik eletrik kachasị dị mfe? HPS Domestique nwere ike ịbụ igwe eletrik na-emepụta ọkụ ugbu a na naanị 8.5 n'arọ (18.7 lb). Hummingbird nwere igwe elektrọnị nke kachasị mfe na 10.3 n'arọ (22.7 lb), ebe Trek na-azọrọ na ya nwere igwe kwụ otu ugwu eletrik zuru oke na 15.75 kg (34.72 lb) .03.05.2021
mgbatị igwe eletrik
Mgbatị igwe eletriki - otu esi edozi
Ọ bụ igwe eletrik ka ọ dị mma mmega ahụ? Gba ịnyịnya ígwè eletrik anaghị aghọ aghụghọ: ị ka kwesịrị ịnyịnya isi ma ị ka na-ere calorie. Ọ dị ka ịnya ịnyịnya igwe nkịtị, ọ dịtụ mfe karị. Gba igwe e-bike bụ ezigbo mmega ahụ. Yabụ ịnya pedelec ka na-ere calorie na ọtụtụ n'ime ha karịa ka ị chere.
bọmbụ igwe eletrik
Bomber electric bike - esi nweta
Kedu ọsọ ọsọ igwe eletriki igwe eletriki igwe? 50 kilomita kwa awa
tern gsd igwe eletrik
Tern gsd igwe eletriki igwe - ihe eji eme ihe
Kedu ihe GSD na-anọchi anya tern? Tern GSD dị nro. Ekele maka wiilị 20-inch, ọ bụ naanị ogologo nke otu ụkwụ nwere ụkwụ ukwu, n'agbanyeghị na ọ nwere oche toro ogologo na ọdụ azụ nwere ikike. Ka o si dị, ọ dị mfe nchekwa na ibi. Nkọwa okwu a pụtara Get Stuff Done. 20. 2019.
tọghata igwe kwụ otu ebe na ọkụ eletrik
Gbanwee igwe kwụ otu ebe na eletrik - otu esi ekpebi
Ego ole ka ọ na-eri iji gbanwee igwe kwụ otu ebe na ọkụ eletrik? Dịka, ihe ntụgharị igwe eletrik sitere na $ 300 na $ 900!
electricmụ nwanyị eletrik eletrik
Bikemụ nwanyị igwe eletriki igwe - otu esi edozi
mmefu ego kacha mma
Ego kachasị mma igwe eletriki igwe - azịza maka okwu ndị a
Ego ole ka igwe igwe eletrik dị mma na-efu? N'ozuzu, igwe eletriki igwe eletrik ga-akwụ ụgwọ site na $ 600 ruo ihe karịrị $ 8000. Ọ bụghị ọtụtụ ebikes dị mma ka enwere maka ihe dị ka $ 1000, yana ọtụtụ ebikes kachasị dị ụgwọ n'etiti $ 1500 $ 4000. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke ebikesia m chịkọtara na ha nọ n'okpuru $ 4000 MSRP.
ị kwesịrị ị pedal ihe electric igwe kwụ otu ebe
Youkwesịrị ịkwanye igwe eletrik eletrik - azịza na ajụjụ dị iche iche
You na-agbada na igwe eletrik? N'ikwu okwu n'ozuzu, e-igwe kwụ otu ebe bụ ịnyịnya ígwè nwere enyemaka batrị na-abịa site na ịpịgharị ụkwụ na, n'ọnọdụ ụfọdụ, trotul. Na mgbakwunye na njirimara na-enyere aka na pedal, ụfọdụ e-igwe kwụ otu ebe na-abịa site na ntụgharị nke na-etinye moto ahụ site na pịa bọtịnụ. 7. 2021.
ịzụrụ skuuta eletrik
Zụta skuta igwe eletrik - azịza dị irè
Buyingzụta skuta igwe eletrik ọ bara uru? Ihe kachasị mma banyere EV bụ na ọ na-echebe gị pụọ na egwu nke ọnụahịa mmanụ ọkụ na India. EV karịsịa ndị scooters eletrik bụ ụzọ akụ na ụba ma e jiri ya tụnyere igwe eji agba mmanụ. N’echiche a, skuuta igwe eletriki na - enye akụnụba karịa ọkụ eletrik n’otu otu pere mpe karịa ego mmanụ ala.